China YXP akateedzera-kupisa-kupisa moto kurwisa feni yakatsaurirwa matatu-chikamu asynchronous mota fekitori nevatengesi | Kutungamira
YXP akateedzera yakakwira-tembiricha moto-kurwisa chiutsi fan yakatsaurwa matatu-chikamu asynchronous mota
Iyi nhevedzano yemamota yakanyatsogadzirirwa kupisa-kupisa moto uye kupisa chiutsi axial mafeni, uye inosangana nezvinodiwa zvinodiwa zveGG50045-95 "Code yeMoto Kudzivirirwa Dhizaini YePamusoro-Simuka Zvivakwa zveVanhu".
Iyo ine kugona kuenderera inonunura yakakwira tembiricha flue gasi pa300 ℃ kweinopfuura maminetsi makumi matatu. Kana dzino dzakateedzana dzemamota dzichishandiswa, mota pachayo inofanirwa kunge iine yakazvimirira inotonhodza mweya nzira, uye yakanyanya tembiricha flue gasi Isolated.
◎ Chimiro Kwete: 80-225
◎ Chimiro Nha. 80-225
Chikamu cheDziviriro. IP44
Kirasi Yekusimudzira: F
◎ Simba: 0.18-45kw, Referensi Frequency: 50Hz
Pashure: YVP yakateedzana matatu-chikamu asynchronous motors eakasiyana frequency frequency kumhanya
IE3 akateedzana Ultra-yakakwira kushanda katatu-chikamu se ...
MS aluminium dzimba matatu-chikamu asynchronous mota
YEJ2 akatevedzana remagetsi akamedura matatu-danho munhu ...